Fiheverana azo ampiharina amin'ny sarontava - Smart Tech Technology
Vaovao Tohana ara-teknika Fiheverana azo ampiharina amin'ny sarontava
Fampidirana fohifohy ao anaty ny sivana ao anatin'ny sarontava: ny fitaovana sivana ao anatin'ny sarontava miaro dia matetika no mizara roa, izany hoe ny vovoka sy ny anti-virus. Ny ampahany dia tokony hisitrika aerosol mampidi-doza, ao anatin'izany ny vovoka, setroka, zavona, entona misy poizina ary etona misy poizina, sns., Raha mampiasa fitaovana sivana, manakana azy tsy hoentin'ny tsirairay.
Ny fampiasana sarontava amin'ny maska ​​amin'ny ankapobeny, ny haben'ny fanafody tsara indrindra, ary ny fomba fametrahana azy dia tokony ho marina mba hiasan'ny sarontava. Ny sarontava azo eny an-tsena dia misaraka amin'ny karazany 2, mahitsizoro ary novokarina tamin'ny kaopy. Ny vava lavalava dia tokony tsy hanana firafitra taratasy telo ambanin'ny telo mba hahazoana vokatra miaro. Ny mpanjifa dia tokony hanery ny tariby manerana ny sarontava ao anaty tetezana ao anaty orona, avy eo dia aparitaho ao anaty tetezana ao anaty ny orona ny maska ​​mba hampiharana ny valiny. Alefaso ny zaza mitafy sarontava fandidiana lava satria tsy manana endrika voafaritra tsara izy io, ka rehefa voafatotra tsara dia mety mifanaraka amin'ny tarehin'ny ankizy. Ny sarontava vita amin'ny kaopy dia tsy maintsy miantoka ny masony manana hakitroka ampy raha vao miraikitra amin'ny hoditra izy ireo, miaraka amin'ny rivotra tsy hivoaka rehefa mifoka izy ireo miasa. Rehefa mitafy saron-tava vita amin'ny kaopy iray fotsiny ianao dia sarony tanana ilay sarontava ary avy eo mitsoka rivotra. Hamarino raha misy rivotra mitete ao anatin'ny sisiny avy amin'ilay sarontava. Rehefa tsy tery ilay sarontava dia mila manamboatra ny asa ianao avy eo apetrakao.
Admin Aprily 9, 2020
PreviousAhoana ny fomba hampihenana ny faharetan'ny fikojakojana ny masinina mivalona haingam-pandeha haingana
ManarakaInona avy ireo karazana masinina saron-tava azo zaraina?